Ị nwere ike ịgwa m ebe m ga-esi zụta akara azụ dị mma na ebe nrụọrụ weebụ ndị njem m?
N'oge a, enwere ọtụtụ ebe dị iche iche ịzụta akara azụmaahịa dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ gị - malite iji biputere ndị ọbịa na jikọta ndị na-arụ ụlọ, na nchịkọta SEO ma ọ bụ Digital Marketing ụlọ ọrụ. N'ezie, e nyere gị na ịnweghị ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị na-eme njem site na onwe gị. Ka o sina dị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị otú a, ọ bụghị ịsị ndị maara ebe ịzụta akara azụ dị mma maka ọnụahịa bara uru, nwere ike ịbụ nke a na-ahụkarị. Ekwuru m na ileghara isi okwu nke ebe nrụọrụ weebụ ahụ, na ikekwe ọ bụla nke azụmahịa azụmahịa, ọtụtụ n'ime ha na-anwa ịkpụcha aha mkpado ndị na-efu maka ọrụ ọrụ ha. Ọ bụ ya mere ọ dị oke mkpa iji mara ọ bụghị naanị ebe ị ga-azụ ezigbo akwụkwọ nkwado azụmazụ kama ịmara ụdọ niile maka inweta ihe kwesịrị ekwesị maka ebe nrụọrụ weebụ ndị njem gị.
Ịlaghachi na isi, ka anyị chee ya ihu - a ghaghị ịkọwaghachilinklinks dịka njikọ yana naanị saịtị ndị dị adị, na-eburu nnukwu ụlọ ọrụ PageRank na ngalaba, nakwa ka okporo ụzọ zuru ezu , isi ihe siri ike na mgbasa ozi mmadụ, yana ezigbo ọdịnaya ọdịnaya. A sị ka e kwuwe, anyị agaghị eme ihe ọ bụla PBN njikọ, nri? N'ụzọ dị otú ahụ, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ebe ị ga-azụta akara azụmaahịa dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ gị na-eme njem site na ụzọ atọ dị iche iche - na-achọ isi njem njem, na-ewere ụfọdụ aka, na ịmalite ịde blọgụ ndị mmadụ na ibe weebụ.
Na-achọ isi njem njem
Nke mbụ, m na-atụ aro ụzọ ị ga-esi chọta ebe nrụọrụ weebụ na-agafe agagharị, n'ihi na nnukwu saịtị ga-ajụ ọrụ njem gị - ha agaghị enwe iji kweta ịkwụ ụgwọ gị maka mgbanwe maka backlink. Ya mere, ana m atụ aro ka ịchọta ebe dị na njem njem - na-eji Google search iji mata ozi kọntaktị ziri ezi, ghọta ọnọdụ na ọnọdụ mpaghara, rụọ ọrụ na izipụ ozi email ndị ahụ "oyi", n'ikpeazụ mechaa nweta ihe ezitere gị backlink na nloghachi. Ma mụ onwe m, eji m nyocha ọchụchọ dịka "saịtị ahụ:" ọbịbịa ọbịa "" wee sụgharịa isiokwu ndị dị mkpa. I nwere ike ịchọ "idegara anyị akwụkwọ" ma duzie gị n'ebe kwesịrị ekwesị.
Iwere aka na-eme
M pụtara ebe a ị kwesịrị ịgbaso usoro atụmatụ dị mfe dị ka nke a. Nke mbụ, dozie ndepụta nke weebụsaịtị ị chere na ọ kacha mma maka akwụkwọ ozi ndị ọbịa. Nke abuo, jupụta n'ụdị ngwa ọ bụla na zipu ozi na onye ọ bụla na-akwado nkwa. Nke ato, ị ga-etinye oge ụfọdụ n'ịmụ ihe niile na ihe ọpụpụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla. E kwuwerị, mgbe ị mesịrị rute n'ọgbọ ahụ, alala azụ iji mee nkwuwa okwu - nye blogger kpọmkwem nkọwa nke mgbalị gị iji nweta SEO backlinks. N'ime nke a, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ede blọgụ ga-enye gị mkpado mkpado ha - ọ bụ maka azụmahịa, ọ bụghị ya?
Ịmalite akwụkwọ nchịkọta ndị ọbịa na njem nchịkọta njem
Ka anyị lee ya anya - dị mwute, ọ bụghị mmadụ nile bụ ezigbo onye edemede site na okike. Ma ọ bụ ị nwere ike na-eche na enweghị oge iji gaa ma dee ederede dị elu na ụfọdụ blogs na njem. Ọ bụrụ na ọ ga-eme otú ahụ, nanị ihe ị ga-eme bụ ịnweta aka ọrụ. N'ezie, ị ga-akwụ ụgwọ maka nke ahụ, mana ịnweta ọbụna onye ọkachamara na-agụ akwụkwọ nwere ike ịghọ ezigbo nzọpụta maka ụmụ nwoke niile ka na-achọ ebe ịzụta àgwà azụmaahịa dị mma na ịde blọgụ ndị ọbịa. N'ezie, ịkwụ ụgwọ maka nnukwu isiokwu na iziga ya na blọọgụ njem ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere mmasị isi na ụlọ ọrụ gị pụtara ihe fọrọ nke nta ihe niile ga-emeworị maka gị. N'oge a, naanị ihe fọdụrụnụ maka nlezianya anya gị bụ ịchọta ezi ọhụụ. Na ụzọ ahụ, echefula ịrụ ọrụ nke ọma na profaịlụ gị arịlịka - chebe ya site na mmalite na n'ihu ihe ọ bụla ọzọ Source . Jisie ike!